Wiil Soomaali ah oo ka sheekeynaya sida lug & gacan isdhaaf ah looga jarey+Daawo – SBC
Wiil Soomaali ah oo ka sheekeynaya sida lug & gacan isdhaaf ah looga jarey+Daawo
Posted by editor on Agoosto 10, 2011 Comments
Wiil yar oo 19 sano jir ah oo Soomaali ah oo lagu magacaabo Ismaaciil Khaliif ayaa ka warbixiyey sida naxdinta huwan ee looga jarey lug & gacan isdhaaf ah, talaabadaasi oo ay ku kaceen sida uu sheegay xubno ka mid ah xarakada Al-Shabaab.
Ismaaciil oo haatan ku nool wadanka Norway wuxuu ka waramayaa sida naxdinta laheyd ee lugta & gacanta looga jarey, qaabkii loola dhaqmay, in daawo ama xanuun baabi’in lagu sameeyey, sababta keentey in lugta & gacanta isdhaafka ah looga jarey, cidii xukunkaasi ku qaaday, nolashiisii yaraaantiisa.
Ismaaciil wuxuu kaloo ka hadlayaa sidii uu ku yimid wadanka Norway & waliba cidii ku siisay gacanta, waxaana barnaamijkan muuqaalka ah diyaariyey Wariye C/raxmaan Xudeyfi, isagoo kula kulmay Ismaaciil wadanka Norway.
Si aad u daawato dhacdadan xanuunka badan & wiilkan oo ka sheekaynaya dhacdada lugta, gacanta looga harey & waliba lugtii & gacantii laga jarey ka daawo link Video-ga hoose.
Agoosto 19, 2011 at 7:46 am
Rabbi (swt) baa garanaya nimanka kor ku masawiran in ay galeen dambiyada looga jaray adimada iyo gacmahaba.Hase ahaatee AL-Shabaab waxaa lagu yaqaan in ay yahiin kuwo an arxan iyo naxariis lahayn.Ugu dambeyn dadkaas ay curyaansheen habaar qabayaal Ilaahay (swt) ha u gargaaro.